Monday March 18, 2019 - 11:20:32 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dagaalka oo bilaawday saaka arootii hore ayaa u dhaxeeya maleeshiyaad katirsan Kooxaha Mushrikiinta ah ee Ahlusunna isugu yeera iyo maleeshiyaad deegaanka ah.
Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in Meydadka illaa 4 qof oo katirsan dhinacyadii dagaallamay saaka lagu arkay gudaha deegaanka Xeraale, maleeshiyaadka kooxaha Mushrikiinta ayaa la sheegay in looga adkaaday dagaalkii saaka dhacay.
Labada dhinac ayaa gurmadyo ciidan ka kala helaya degmooyinka Dhuusamareeb iyo Caabud Waaq oo taageerayaashoodu ay maamulaan, boqolaal qoys oo deganaa deegaanka Xeraale ayaa isbuucii lasoo dhaafay bilaabay in ay deegaanka isaga barakacaan xilligaas oo ladareemayay xiisadaha colaadeed iyo isku hub aruursiga ay dhinacyadu wadeen.
Dagaalka socda ayaa salka ku haya maamulidda deegaanka Xeraale warar lagasoo xigtay dadka deegaanka ayaa sheegaya in maleeshiyaadka deegaanka ee la dagaallamaya Kooxaha Mushrikiinta ee ku biiray maamulla Galmudug ay taageero toos ka ah ka helayaan dowladda Farmaajo oo khilaaf kala dhaxeeyo maamulka uu madaxda ka yahay Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Sanaddii 2017 ayay dagaallo lagu hoobtay ka dhaceen deegaanka Xeraale oo xilligaas wixii ka dambeeyay ka maqnaa gacan ku heynta maleeshiyaadka Kooxaha Mushrikiinta waxaana muuqata in markale uu deegaanku marti gelinayo dagaal xarig jiid ah.